'प्रमाणले भारी छौं, सरकारलाई सवैले साथ दिनुपर्छ'
२०७७ जेठ ११ आइतबार, बैतडी । जब सिमाको विषयमा समस्या आउछ, तब मात्र बोल्ने र विरोध गर्ने हाम्रो प्रवृति रहेको छ । केही दिन बहशमा आउछन पछि सेलाउछन् । त्यसैले अहिले त्यसो नहोस भन्ने हाम्रो चाहना छ । वि.सं. २०७२ सालमा भुकम्पले नेपाल थिलथिल परेको मौका छोपेर द्धय छिमेकी राष्ट्र भारत र चिनले नेपालको भूमि हडपने गरीे ४१ बुँदै संयुक्त सम्झौंता गर्‍यो । त्यसको २८ नं. बुदामा लिपुलेक भएर ब्यापारिक नाका खोल्ने सम्झौंता गरेको थियो । ठिक अहिले कोरोना संक्रमणले विश्व हायलकायल भएको बेला मानसरोबर जाने सडक निर्माणको हल्ला आएको छ । ... बाँकी अंश»
गुरुकुल शिक्षाको पाठ्यक्रममा विज्ञानको अभावले पुर्‍याएको क्षति
२०७७ जेठ ११ आइतबार, "संस्कृतं संस्कृतेर्मूलम् "संस्कृत नै मौलिक संस्कृतिको आधार यानी कि मूल हो।"वेदो$खिलो धर्ममूलम्" वेद नै सबै धर्मको मूल आधार हो ।उपरिलिखित दुई संस्कृत पद्यांश मिथक होइनन् सत्य हुन्। ... बाँकी अंश»
कहाँ चुक्यो नेकपा ?
२०७७ जेठ ११ आइतबार, २१ औं शताब्दीको जनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादले आधारभूत भिन्नता देखिन्छ । किन कि जबजले मार्क्सवाद (लेनिनवाद र माओवाद) सारलाई समेट्न सकेको देखिदैन । ... बाँकी अंश»
आज आइतबार पूर्व र दक्षिण बाहेक अन्य दिशाको यात्रा नगर्नु वेश, उपाय के छ ?
२०७७ जेठ ११ आइतबार, नेपालको काठमाडौं केन्द्रबिन्दुमा रहि बिहान ठीक ५ बजेर १३ मिनेटमा रुद्र मुहूर्तमा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ ठीक ६ बजेर ५० मिनेटमा हुनेछ । ... बाँकी अंश»
२०७७ जेठ १० शनिबार, ‘मनिषा दिदी फर्कनु घर देशको आकार फेर्न लागौं मलिन नेपाली आमाको अनुहार चम्किएको हेर्न लागौं ’ ... बाँकी अंश»
शनिबार कुन समय त उत्तम ? दक्षिण दिशाको यात्रामात्र शुभ !
२०७७ जेठ १० शनिबार, पुरुषको नेतृत्वमा उत्तर पूर्व तथा स्त्रीको नेतृत्वमा वायव्य अर्थात उत्तर पश्चिम र ईशान अर्थात उत्तर पूर्व दिशाको यात्रा गर्दा राम्रो हुनेछ । ... बाँकी अंश»
अप्सरा देखेर घीउ जस्तै पग्लिए देवदत्त, १० हजार वर्षसम्मको कठोर तपस्या बिर्सिए
२०७७ जेठ ९ शुक्रबार, भृगु वंशमा देवदत्त नाम गरेका एक ब्राम्हण थिए । उनले आफ्नो आश्रममा बसेर १० हजार वर्षसम्म कठोर तपस्या गरेका थिए । उनले गरेको तपस्याले ईन्द्रलाई डाहा भयो । उनले देवदत्तको तपस्या भंग गर्न भनेर प्रम्लोचा नाम गरेकी अप्सरालाई बोलाए । उनले प्रम्लोचालाई नाच गान आदि जे गरेर भएपनि उनको तपस्यामा विघ्न बाधा पार्नु भनेर अर्‍हाए । आंपका पालुवा, अनेक प्रकारका सुगन्धित फूलहरुको वास्ना तथा भंवराहरुको गुञ्जन तथा शितल बातावरणले सम्पन्न भएको त्यस आश्रममा तपस्यारत देवदत्तको तपस्या भंग हुन गयो । उनले आफूलाई सम्हाल्न सकेनन् र प्रम्लोचासंग वार्तालाप गर्दै रमाइलो मानेर समय बिताउन लागे । ... बाँकी अंश»
लकडाउनका ६० दिन: कठोर परिस्थितिले सत्तालाई छुँदै छोएन, जनतालाई छोड्दै छोडेन
२०७७ जेठ ९ शुक्रबार, एकबाट अर्का एकजना संक्रमित थपिएको कारण घोषणा भएको लकडाउन ६० औ दिन पुग्दा ४६० को सख्याबाट उकालो लाग्यो । एक जिल्लामा भएको संकमण ४० जिल्लामा विस्तार भयो । सरकारले कोरोना रोगबाट सबैको जीवन जोगाउन सफल भएको घोषणा गरको हप्ता नपुग्दै तीन जनाको ज्यान गयो । यसले सरकारको दूरदृष्टी दुई दिन पनि नटिकेको र त्यस अनुसारको तयारी पनि नभएको चित्र देखाउँछ । ... बाँकी अंश»
२०७७ जेठ ९ शुक्रबार, पन्ध्रौं योजनाको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको लगानी ५५.६ प्रतिशत हुन पर्नेछ। यो भनेको ५१ खर्ब हो । यसले पनि निजी क्षेत्रको महत्व पुष्टि गर्दछ । अहिले बन्द रहेका व्यवसायिक इकाईमा लगानी भएको खर्बौंको पूँजी नेपाली हो, त्यसबाट रोजगारी गुमाउने लाखौं व्यक्ति पनि नेपाली नै हुन । बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो हुन्छ । यदि व्यवसाय सुचारु हुन सकेनन् र डुब्दै गए भने करोडौं नेपालीको निक्षेप समेत फिर्ता गर्न नसक्ने गरी बैंकहरुनै डुब्ने छन् त्यसले झन् अकल्पनीय संकट ल्याउने छ । मलाई लाग्छ,व्यवसायीको मागमा बैंकहरु सबैभन्दा पहिला सहमत हुनेछन् । ... बाँकी अंश»
आज पूर्व र दक्षिण बाहेक अन्य दिशाको यात्रा नगर्नु वेश, गर्नैपरे के गर्ने ?
२०७७ जेठ ९ शुक्रबार, आज कृत्तिका नक्षत्र, विष्कुम्भादि योगमा शोभन, करणमा चतुष्पद, आनन्दादि योगमा छत्र रहनेछ । ... बाँकी अंश»
सबै लोकप्रिय निर्णयले राम्रै गर्छ भन्ने ठोकुवा गर्न सकिदैन
२०७७ जेठ ९ शुक्रबार, महाभारतमा सबै मुख्य पात्रहरुले हस्तिनापुरको राम्रो भविष्यको लागी ऐतिहासीक निर्णय लिएका थिए। हरेक प्रमुख पात्रको निर्णय हस्तिनापुरका जनताले दियो बत्ती बाली स्वागत गरे। ... बाँकी अंश»
कोरोनाले निम्त्याएको आर्थिक संकट
२०७७ जेठ ८ बिहिबार, विश्वव्यापी महामारिको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्नका लागि घोषणा गरिएको लकडाउनले विश्वमा आर्थिक संकट निम्त्याउदै छ । सामान्यतया आर्थिक संकट भन्नाले अर्थ व्यवस्थाको क्रियाकलापहरु घट्दै जानु भन्ने बुझिन्छ । विश्वका ठूला अर्थतन्त्र धानेका देशहरु अमेरिका, बेलायत, जापान चीन तथा युरोपियन देशहरु संकटमा पर्दैछन् । ... बाँकी अंश»
सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिकोणले यो अलोकप्रिय सरकार हो – भोजराज श्रेष्ठ, भत्ता नकाट्ने मन्त्रीको आश्वासन
२०७७ जेठ ८ बिहिबार, अहिले न रोजगारी छ न सरकारले पर्याप्त मात्रामा सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता द्याछ । औषधि खानुपर्ने मान्छेहरु छन् । ... बाँकी अंश»
भूमि नेपालको भोगचलन भारतको
२०७७ जेठ ८ बिहिबार, बिस २०६५ सालको बैशाखतिर हाल भारतीय सैनिक बसेको क्षेत्र कालापानीसम्म गएर त्यहाँको भौगोलिक बनोट र बस्तुस्थितिको बारेमा प्रत्यक्ष देखेको छु। मलाई त्यतिखेर थाहा थिएन कि त्यो क्षेत्र हाम्रै हो भनेर। व्यवसायको सिलसिलामा आफन्तको साथ लागेर त्यहाँ रहेका सैनिकहरुको रासन ढुवानी गर्न खच्चर लगेर गएको थिए त्यहाँ। ... बाँकी अंश»
आज पूर्व र उत्तर बाहेक अन्य दिशाको यात्रा नगर्नु वेश, गर्नैपरे के गर्ने ?
२०७७ जेठ ८ बिहिबार, आज चन्द्रमा मेष राशिमा रहनेछ । आज पूर्व र उत्तर बाहेक अन्य दिशाको यात्रा नगर्नुहोला । आज बिहीबार दक्षिण दिशाको यात्रा नगर्नुहोला । ... बाँकी अंश»
प्रदीप गिरीले भन्न खोजेको सत्ता रूपान्तरण के हो?
२०७७ जेठ ७ बुधबार, केही दिन अघि सदनमा बोलिएको यौटा भाषण सामाजिक संजालमा रातारात भाइरल भयो। रक्सीको नशा खाए पछि लाग्छ, पैसाको नशा पाए पछि लाग्छ अनि सत्ताको नशा गाए पछि लाग्छ। यी वाक्यहरु अहिले प्रायः नेपालीको जिब्रोमा झुन्डिएका छन्। ... बाँकी अंश»
आज मृत्यु योग, टाढाको यात्रा नगर्नु वेश, गर्नै परे के गर्ने ?
२०७७ जेठ ७ बुधबार, आज सूर्योदय नेपालको काठमाडौं केन्द्रबिन्दुमा रहि बिहान ठीक ५ बजेर १४ मिनेटमा तुरुदेव मुहूर्तमा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ ठीक ६ बजेर ४८ मिनेटमा हुनेछ । ... बाँकी अंश»
श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय अठारः मोक्षसंन्यासयोग
२०७७ जेठ ६ मंगलबार, अर्जुनको विषाद हटाउँदै अर्जुनलाई किन धर्मयुद्ध जरूरी छ भन्दै आउनुभएका श्रीकृष्ण अब उपदेश दिने क्रमको अन्त्यतिर आइपुग्नुभएको छ । कर्म, ज्ञान र भक्तिका हरेक पक्षको पक्का जानकारी पाइसकेपछि अब फेरि अर्जुनमा जीवनको अन्तिम सत्य संन्यासको बारेमा जान्ने चाह हुन्छ । त्यहींबाट यो अठारौं अध्याय सुरू हुन्छ । ... बाँकी अंश»
बजेटको तयारीमा जुटेको स्थानीय सरकारलाई सुझाव !
२०७७ जेठ ६ मंगलबार, कोरोना भाईरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या बढेको बढै छ । नेपालमा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या बढि भएको छ, अहिलेसम्म संक्रमितहरु विदेश तथा भारतबाट आएका नेपाली नागरिकहरु रहेका छन । संघीय सरकारले बजेट निमार्णको तयारी गरेको छ । ... बाँकी अंश»
मंगलबार कतिबेला छ उत्तम समय, किन गर्नुहुँदैन राहुकालमा शुभकार्य ?
२०७७ जेठ ६ मंगलबार, यसमा चर भन्दा शुभ, शुभ भन्दा लाभ राम्रो, लाभ भन्दा अमृत सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ । त्यसैले जे काम गर्दा पनि शुभ, लाभ र अमृत बेला पार्नुहोला । ... बाँकी अंश»